Ii-Galaxy A30s ziya kuza nekhamera ngasemva kathathu kunye nescreen se-Infinity-V | I-Androidsis
Kwiinyanga nje ezintlanu ezidlulileyo, i-Samsung isungule Galaxy A30, I-smartphone yokusebenza okumgangatho ophakathi eyinxalenye yosapho olubanzi lwee-smartphones zothotho lwe-Galaxy A. Isixhobo samkelwe kakuhle ngabathengi, kwaye ngokuqinisekileyo yiyo loo nto inkampani yaseMzantsi Korea izakuyihlaziya kungekudala ngolunye uhlobo olutsha malunga nokuqalisa.
IiGPS A30s ziya kuba yinguqulelo ethe kratya ngakumbi kule mobile sele ikhankanyiwe. Oku kuyakudibanisa isivamvo esinye sekhamera kwiphaneli yangemva kunye nenotshi eyahlukileyo yescreen, kunye nezinye izinto ezinokubakho ezingcono kunye nokubalulwa kobuchwephesha.
Ngokwengxelo epapashwe kutshanje yi-portal 91Mobiles, ii-Samsung Galaxy A30s ziya kuphehlelela kungekudala ngekhamera ngasemva kathathu kunye nomboniso we-Infinity-V. Uphawu lwenotshi yolu hlobo lwepaneli- ebizwa ngolo hlobo yiSamsung- yimilo yayo 'V', njengoko sele uyazi okanye unokuqikelela.
I-Samsung Galaxy A30 kunye ne-A50 esemthethweni
Umthombo uyabalisa isikrini, ngaphandle kotshintsho esiza kuthatha, asiqhayisi ngophuculo olubonakalayo. Ke ngoko, sinokujamelana nescreen setekhnoloji enye ye-AMOLED enedigonal ye-6.4 intshi kunye nomlinganiso we-19: 5: 9, kunye naleyo inayo i-Galaxy A30, exhobisa iphaneli ye-Infinity-U.
Khumbula ukuba eyokugqibela yenziwa igosa ngeqonga le-Exynos 7904 yeqonga leselfowuni (i-2x Cortex-A73 kwi-1.8 GHz + 6x Cortex-A53 kwi-1.6 GHz) kunye ne-14 nm, kunye nememori ye-3 okanye ye-4 GB ye-RAM kunye Indawo yokugcina engama-32 okanye ama-64 GB, ngokulandelelana. Esi sixhobo sikwanikwe ibhetri ye-4,000 mAh ngenkxaso ye-15-watt yokutshaja ngokukhawuleza.
Kwelinye icala, isebenzisa ikhamera ye-16 kunye ne-5 MP ngasemva, kunye nesisombululo se-selfie shooter ye-megapixel eyi-16.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ii-Samsung Galaxy A30s ziya kufikelela kwintengiso ngekhamera engasemva kathathu kunye nescreen se-Infinity-V
IGolden Fold inokufika ukuphela kukaSeptemba